अन्नलाई स ुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने ड्राई कार्ड – कृषक र प्रविधि
तपाईले बोरामा भण्डारण गरि राखेको अन्न चिस्यान वा ओसका कारण बिग्रिन लाग्यो कि, सुकाउने बेला भयो कि भनेर पत्ता लगाउने कुनै वैज्ञानिक उपाय सायद प्रयोग मा ल्याउनु भएको छैन । भण्डारण गरिएको अन्नमा ओस या चिस्यानका कारण प्रायः विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा धेरै अन्नको क्षति हुने गरेको छ । उपयुक्त चिस्यानको मात्रा कायम गर्न नसक्दा विश्वमा वर्षमा हजारौ टन कृषि उपजहरु क्षति भएर गइरहेका छन् । हाम्रो गाँउघरमा पनि परम्परागत ढंगबाट बोरा, भकारी आदीमा कृषि उपजको भण्डारण गर्ने चलन रहि आएको छ, । यसरी भण्डारण गर्दा अन्नमा कति चिस्यान छ भन्ने कुरा थाहा हुदैँन र कहिले काही ओस या चिसो बढी भएर ढुसी पलाईरहेको हुन्छ । भण्डारण गरि राखिएको अन्नमा परेको ढुसीले अन्नको क्षति मात्र हुदैँन त्यस्ता अन्नको उपभोगले मानव स्वास्थ्यमा समेत ठूलो असर पार्दछ ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न अमेरिकी नियोग संस्था ग्क्ब्क्ष्म्, ँभभम तजभ ँगतगचभ को सहयोगमा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया डेभिसका विज्ञहरुले लामो समय अनुसन्धान गरी चिस्यान पत्ता लगाउने ड्राई कार्डको निमार्ण गरेका छन जुन भण्डारण गरि राखिएको कृषि उपजको चिस्यान पत्ता लगाउने सस्तो, सजिलो तथा सरल विधि हो ।
डा«ई कार्डले कसरी काम गर्छ ?
भmट्ट हेर्दा परिचय–पत्र जस्तो देखिने यो कार्डमा एउटा चिस्यान नाप्ने कागजको टुक्रा राखिएको छ । जुन कागजको टुक्रालाई ऋयदबति ऋजयिचष्मभ ज्गmष्मष्तथ क्ष्लमष्अबतयच भनिन्छ । कुषि उपजमा रहेको चिस्यान अनुसार यस कागजले आफ्नो रंग परिवर्तन गर्ने गर्दछ । यो कागज टाँसिएको छेउमा कस्तो रंग परिवर्तन भएमा कति प्रतिशत चिस्यान रहेको वुझ्न,े भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । कागज प्रष्ट वैजनी रंगको भयो भने चिस्यान बढी छ भन्ने वुझ्न सकिन्छ भने प्रष्ट निलो रंगले सुख्खापनको मात्रा देखाउदछ । चिस्यान कति भन्दा माथि भएमा ढुशीको विकास हुन्छ र कति भन्दा कम भएमा ढुसीको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट संग उल्लेख गरिएको छ । कृषि उपज राखिएको भाँडा÷वोरा÷थैलीहरुमा यो कार्डलाई २०–३० मिनेट राख्दा यसले चिस्यानको मात्रा देखाउदछ ।
यो प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरु
– किसान आफैले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा पोष्टहार्भेष्ट क्षति कृषक स्तरबाटै कम गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय कृषि उपजमा उपभोक्ताको पहुँच सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
– कृषि उपजको गुणस्तर वद्धि गरी वढी मुनाफा लिन सकिन्छ ।
– यो प्रयोग गरी उपयुक्त चिस्यान कायम गर्दा भण्डारण गरिएको विउको उमार शक्ति राम्रो हुन्छ ।
– कृषि उपजलाई स्वस्थ बनाई, मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
ढुसी परेको अन्न उपभोग गर्दा के हुन्छ ?
चिस्यानका कारण भण्डारगरिएकोअन्नमाअफ्लाटोक्सीन नामक विषाक्त पदार्थको उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा सो अन्न उपभोग गर्ने मानिस तथा पशुमा पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ । विश्वमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले अफ्लाटोक्सीनका कारण क्यान्सर रोगको बृद्धि भएको देखाएको छ । हाम्रा किसान तथा उपभोक्ताले खानको लागि घरमा अन्न भण्डारण गरेर राख्ने चलन छ । अन्नलाई उपयुक्त चिस्यानमा भण्डारण गरि नराख्दा ढुसी पर्दछ । हामी त्यसलाई खासै समस्याका रुपमा लिदैनौ र सोको उपभोग गर्ने गर्दछौ वा पशुलाई खुवाउने गर्दछौ । यस्ता अन्नहरु मानिसले उपभोग गर्दा वा पशुलाई खुवाउदा सो पशुबाट उत्पादित दुध तथा मासुको उपभोगले पनि मानव स्वास्थ्यमा रोग विरुद्ध लड्ने क्षमतामा ह«ास गराउदै क्यान्सर समेत लाग्ने गर्दछ ।
ड्राई कार्ड कसरी पाउन सकिन्छ
युनिभर्सिटी अफ क्यालीफोर्निया , डेभिस स्थित हर्टिकल्चर इनोभेसन ल्याबको अनुमति लिई नेपालमा ड्राई कार्डको उत्पादन तथा बिक्री वितरण आर. एण्ड डि. इनोभेटिभ सोलुसन प्रा.लि.ले गर्दै आएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सहकारी संस्था, सहकारी वा स्थानीय तहले आफना कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउनु परेमा आवश्यक परिमाणमको लागि सम्र्पक गर्न सक्नुहुन्छ । एग्रीसेन्टर, ०१–४७८५७५६, ९८४००७२७१७, ९८०१०८४२०५
सस्तो र भरपर्दोकोल्ड रुम